[Okushiyiweyo] Log Umoya woShishino/Isikhululo sikaloliwe/Isitrato sabahambi ngeenyawo/ Indawo yokuhlala yasekhaya ngeHolide/Ukudibana nawe okungalindelekanga - I-Airbnb
[Okushiyiweyo] Log Umoya woShishino/Isikhululo sikaloliwe/Isitrato sabahambi ngeenyawo/ Indawo yokuhlala yasekhaya ngeHolide/Ukudibana nawe okungalindelekanga
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe ongu搁浅/房东青青
Indawo yokungena kwimizi-mveliso yelizwe laseMelika!
Ifakwe kwindawo echumileyo embindini wesixeko saseYueyang, ngokuchasene nesikwere sesikhululo sikaloliwe, kufutshane nesithili sevenkile sabahambi ngeenyawo, iBBK, iYouA International, kwaye ezothutho zilunge kakhulu!
Ukuba nawe uyayithanda, eli likhaya lakho eYueyang!
Ixhotyiswe ngee-air conditioners ezinophawu, iifriji, iiTV, iibhotile zamanzi ashushu, oomatshini bokuhlamba abazenzekela ngokupheleleyo, iirakhi zokomisa, izipili ezigcweleyo, ishampu enuka kamnandi nejeli yeshawa, isisusa semakeup, intlama yamazinyo elahlayo kunye neebrashi zamazinyo, unogada kwindawo nomnyango basebenza iiyure eziyi-24, unako ukuhlala ngokukhululeka!
Kwindawo yoshishino kwisikhululo sikaloliwe kukho iivenkile ezinkulu, abalungisi beenwele, kunye neendawo zokutyela ezantsi kwiplaza yesikhululo sikaloliwe.Kulula kakhulu.Kukho ivenkile enkulu yaseWal-Mart kunye nebar yendawo ezimitha ezingama-500.Ungahamba uye kwisitrato sabahambi ngeenyawo. 'i-International kunye ne-BBK Plaza kwimizuzu eli-10! Itrafikhi iluncedo kakhulu ~
Umbuki zindwendwe ngu- 搁浅/房东青青
Itshixa ye-Smart lock yokungena
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda ufowunele okanye uqhagamshelane nam nangaliphi na ixesha